सुझावको आशामा - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
मैले ग्रीनकार्ड पाएको ४ वर्ष भयो । साथीहरुबाट सुनेअनुसार ५ वर्ष पुग्नुअगाडि नै पनि अमेरिकाको नागरिकताका लागि निवेदन गर्न सकिन्छ रे, के यो साँचो हो ? यदि हो भने कति समय अगाडि निवेदन फायल गर्न सकिन्छ ? र, यसको प्रोसेस के छ ? बताइदिनुहोला । धन्यवाद ।
– सनम, अमेरिका
अमेरिकी नागरिकताको विभिन्न रिक्वायरमेन्ट्सहरुमा एउटा रिक्वायरमेन्ट फिजिकल प्रिजेन्स हो । अर्थात् ग्रीनकार्ड पाएको दिनदेखि ग्रीनकार्डको अवधि ५ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ र अमेरिकामा फिजिकल्ली बसेको घटीमा अढाई वर्ष हुनुपर्नेछ । सिटिजनसिपको निवेदन दिँदा एन–४०० फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदन कहिले फायल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेको दिनदेखि ५७ महिना पुगेपछि एन–४०० एप्लिकेसन युएससीआईएसमा फायल गर्न सकिन्छ । तर, सिटिजनसिपको अन्तरवार्ताको दिनमा ६० महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ । ५७ महिनापश्चात् तुरुन्तै फायल गर्नुभयो भने एन–४०० एप्लिकेसन प्रोसेसिङमा लाग्ने समय जस्तै– फिङ्गर प्रिन्ट्स, एफबीआई ब्याकग्राउण्ड चेक आदि कुराहरु, सो ३ महिनाको ग्रेस पिरियडमा गर्न सकिनेछ ।
मेरो अमेरिकाको ग्रीनकार्ड भएको साढे ३ वर्ष भयो । भर्खरै मेरो विवाह भयो । मेरो श्रीमती एफ–१ भिसामा छिन् । म उसलाई ग्रीनकार्डको लागि स्पोन्सर गर्न चाहन्छु । मेरो प्रश्न यो छ कि के मैले उसको लागि ग्रीनकार्डको लागि एप्लिकेसन अहिले नै गरौं कि म सिटिजन भएपछि गरौं होला ? धेरै जना साथीभाइहरुले सिटिजन भएपछि मात्र गरे हुन्छ भन्ने सल्लाह दियो । दोधारमा म छु, के गरे ठीक होला ? सुझाव दिनुहुन्छ कि भन्ने आशामा छु ।
तपार्इंले आफ्नो श्रीमतीलाई फेमिली पेटिसन फायल गर्नका लागि युएस सिटिजन नै हुनुपर्ने छैन । तपाईं अहिले पर्मानेन्ट रेसिडेन्टको हैसियतले पनि आई–१३० पेटिसन युएससीआईएसमा फायल गर्न सक्नुहुनेछ । पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट (पीआर)को इमेडियट रिलेटिभ (आईआर) स्पाउसेस र नाबालक बच्चाहरुको ग्रीनकार्डको भिसाको ब्याकलक अहिले २ वर्ष करिब रहेको छ । तपाईंको श्रीमतीले एफ–१ वा अन्य कुनै भिसा मेन्टेन गर्नुभयो र पछि इमिग्रान्ट भिसा तपाईंको आई–१३० पेटिसनको लागि करेन्ट भयो भने तपाईं पीआर रहँदारहँदै पनि तपाईंको श्रीमतीले ग्रीनकार्डको निवेदन (आई–४८५) फायल गर्न सक्नुहुनेछ । तर, भिसा करेन्ट हुनुअगावै तपाईं युएस सिटिजन हुनुभएमा सोही आई–१३० पेटिसनलाई अपग्रेड गरी तपाईंको श्रीमतीले आई–४८५ एड्जष्टमेन्ट अफ स्टाटस एप्लिकेसन फायल गर्न सक्नुहुनेछ । यसकारण अहिले पीआरको हैसियतले आई–१३० पेटिसन फायल गर्ने सुझाव छ ।